မငျးကှနျးဆရာတျောကွီးလို သာသနာပွုရနျအတှကျ IPHONE 13 PRO အလှူ ခံ တဲ့ ဘုနျးကွီး - Shwe Khit
မငျးကှနျးဆရာတျောကွီးလို သာသနာပွုရနျအတှကျ IPHONE 13 PRO အလှူ ခံ တဲ့ ဘုနျးကွီး
ကုသိုလျတံခါးတဈခကျြဖှငျ့ပေးလိုကျသညျပငျ ယခုခတျေအခါ “5G သာသနာ ဒို့သာသနာ” ဆိုရလောကျအောငျ 2025-2070 အထိ ဖွဈလသေောကွောငျ့ အရှငျ ဝိစာရိန်ဒ မထရျေ ၏ အသုံးပွုမညျ့ ရဟနျးဘဝ သုံးသာသနာပွုဖုနျးဖွဈပသေညျပငျ မငျးကှနျးဆရာတျောဘုရားကွီး
သူ့ခတျေသူ့အခါ နညျးပညာဖွငျ့ လကျနှိပျလေးသုံးကာ စှမျးဆောငျရှေ့ သာသနာပွု၏ပငျ၊ ဆရာတျောဘုရား၏ လကျနှိပျကို အကောငျးဆုံးထောကျပံ့ လှူဒါနျးသှားသညျ့ အလှူရှငျ ဒါယကာ၊ ဒါယကာမ မြား ဘယျသူဘယျဝါမှနျးမသိလိုကျကွပမေယျ့ ယခု 5G သာသနာပွုမညျ့ အရှငျ
ဝိစာရိန်ဒမထရျေ ၏ ဖုနျးအလှူရှငျမြားအတှကျတော့ ဒါယကာ၊ ဒါယကာမမြားရရှိလှူနျးဒါနျးနိုငျသညျ့ အခှငျ့အရေးထူးပါ။ ဘုနျးကွီးတှေ အသုံးပွုမညျ့ Software တှေ၊ Application တှေ၊ ၁၁၁ ပါးသော ဘာသာပွနျ Multiple Language Translation တရားဟော Software မြား၊
Hologram Software တှေ၊ ကမ်ဘာတရားဟော စငျမွငျ့ Stations တှေ Server တှေ ဒါတှအေားလုံးကိုလဲ ဒို့ ရဟနျး သံဃာ ဘုနျးကွီးတှပေဲ ဦးဆောငျလုပျရမှာပါတဈကယျ။ နညျးပညာကွောငျ့ ဒို့တဈတှေ လှယျကူသှားသာသနာပွုရမညျဆိုသျောဌားလဲ တရားစာတှေ အားလုံး Online
မှာရှိတယျ ဆိုပွီး စာမသငျ စာမကကျြအပငျြးခိုသာသပွုလို့မရပါဘူး၊ ကိုယျတိုငျလဲနှုတျတိုကျ အာဂုဏျဆောငျထားနိုငျရမညျပငျ ရဟနျးတှေ လှယျကူစှာသာသနာပွုဖို့ ဖုနျးလှူတဲ့ ကုသိုလျတျောကွောငျ့ ဒါယကာ၊ ဒါယကာမမြား လိုအပျနတေဲ့ ပွညျပနိုငျငံခွား အိမျနီးခငျြးဆကျသှယျရေး
အထောကျအပံ့ အကူအညီမြားလဲရမညျပငျ လှူတဲ့သူတိုငျး ရမညျပငျ။ ရဟနျးတို့၏ သာသနာပွုပိုငျးဆိုငျရာ လိုအငျ ဆန်ဒမြားကိုဖွညျ့စညျးပေးလို့ မိမိ လိုအငျ ဆန်ဒမြားလဲ ဖွညျ့ မညျပငျ အရှငျဝိစာရိန်ဒမထရျေသညျ လူအမြားစု တိုငျးသူပွညျသားတို့ အပျေါ သနားဂရုဏာ မတ်ေတာထားရှေ့
ဆောငျယူတတျသော ရဟနျးဖွဈသညျ့အတှကျ လူအမြားစု တိုငျးသူပွညျသားအမြားစုအပျေါ၌ သာ ယခုဖုနျး အလှူငှေ ဝတ်ထုတျောအား အားကိုးရှမြေှ့ျောကိုပါတယျတဈကယျသံ ဃာတျောတဈခြို့သညျ အာဏာရှိမှ ဥစ်စာမြားမှ ရှလေကျတှဲလိုခငျြကွလို့ အပွောအဆို မကငျးဖွဈရသညျ့
အဖွဈဆိုးမြားရှိ၏ ဘုနျးဘုနျးအတှကျကတော့ အာဏာရှိမှ ဥစ်စာမြားမှ ရှလေကျတှဲစရာမလိုပဲ အမြားပွညျသူပွညျသား တိုငျးရငျးသားမြား ဒို့အတှကျရှိနသေေးပငျ သာသနာပွုနိုငျသညျဆိုတာကို ယုံကွညျသညျပငျ။ မိမိ လောဘစိတျကိုအလိုမလိုကျသညျမို့ ဖုနျးအလှူခံခွငျးကိစ်စကိုလဲ
အဓိဌာနျပွုကာ ၂ ပတျပဲ အလှူခံပါ့မယျတဈကယျ။ ဘုနျးဘုနျး ယခုအခါ Iphone 13 Pro White (1TB) အတှကျ စုပေါငျးဝတ်ထုအလှူငှေ ၈ သိနျးရရှိနပွေီဖွဈလို့ ကနျြအလှူငှမြေားကို Kpay 09-45-5022691 Account Name: Nay Myo Kyaw သို့ စှနျ့လှူနိုငျပါသညျ။ အမရေိကား
မှ ဘုနျးဘုနျး ရဟနျးဒါယကာ၊ ဒါယကာမမြား ကွိုတငျ Order မှာယူရှေ့ ဝယျယူထားပွီးပငျဖွဈသညျ 🦠🙏🏻🧘🏻‍♂️🧘‍♀️🤍🇲🇲🦠 (ဘုနျးဘုနျး ဘယျတော့မှ အကွောငျးမဲ့ အလှူမခံပါ အလှူခံသညျ့ရကျ ကို အမွဲအခြိနျ အတိုငျးအတာထားရှသေ့ာ အလှူခံထားသညျဆိုတာကလဲ အဓိဌာနျ
အလှူဖွဈသညျ။ နငျတို့ ရှဆေ့ကျ ဆကျသှယျရေးက အရေးကွီးကွတာမို့ တတျနိုငျသလောကျ နညျးမြားမဆို ပါဝငျလှူဒါနျးကွပါ တကယျ) ခရကျဒဈ.
ကုသိုလ်တံခါးတစ်ချက်ဖွင့်ပေးလိုက်သည်ပင် ယခုခေတ်အခါ “5G သာသနာ ဒို့သာသနာ” ဆိုရလောက်အောင် 2025-2070 အထိ ဖြစ်လေသောကြောင့် အရှင် ဝိစာရိန္ဒ မထေရ် ၏ အသုံးပြုမည့် ရဟန်းဘဝ သုံးသာသနာပြုဖုန်းဖြစ်ပေသည်ပင် မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး
သူ့ခေတ်သူ့အခါ နည်းပညာဖြင့် လက်နှိပ်လေးသုံးကာ စွမ်းဆောင်ရွေ့ သာသနာပြု၏ပင်၊ ဆရာတော်ဘုရား၏ လက်နှိပ်ကို အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ လှူဒါန်းသွားသည့် အလှူရှင် ဒါယကာ၊ ဒါယကာမ များ ဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်းမသိလိုက်ကြပေမယ့် ယခု 5G သာသနာပြုမည့် အရှင်
ဝိစာရိန္ဒမထေရ် ၏ ဖုန်းအလှူရှင်များအတွက်တော့ ဒါယကာ၊ ဒါယကာမများရရှိလှူန်းဒါန်းနိုင်သည့် အခွင့်အရေးထူးပါ။ ဘုန်းကြီးတွေ အသုံးပြုမည့် Software တွေ၊ Application တွေ၊ ၁၁၁ ပါးသော ဘာသာပြန် Multiple Language Translation တရားဟော Software များ၊
Hologram Software တွေ၊ ကမ္ဘာတရားဟော စင်မြင့် Stations တွေ Server တွေ ဒါတွေအားလုံးကိုလဲ ဒို့ ရဟန်း သံဃာ ဘုန်းကြီးတွေပဲ ဦးဆောင်လုပ်ရမှာပါတစ်ကယ်။ နည်းပညာကြောင့် ဒို့တစ်တွေ လွယ်ကူသွားသာသနာပြုရမည်ဆိုသော်ဌားလဲ တရားစာတွေ အားလုံး Online
မှာရှိတယ် ဆိုပြီး စာမသင် စာမကျက်အပျင်းခိုသာသပြုလို့မရပါဘူး၊ ကိုယ်တိုင်လဲနှုတ်တိုက် အာဂုဏ်ဆောင်ထားနိုင်ရမည်ပင် ရဟန်းတွေ လွယ်ကူစွာသာသနာပြုဖို့ ဖုန်းလှူတဲ့ ကုသိုလ်တော်ကြောင့် ဒါယကာ၊ ဒါယကာမများ လိုအပ်နေတဲ့ ပြည်ပနိုင်ငံခြား အိမ်နီးချင်းဆက်သွယ်ရေး
အထောက်အပံ့ အကူအညီများလဲရမည်ပင် လှူတဲ့သူတိုင်း ရမည်ပင်။ ရဟန်းတို့၏ သာသနာပြုပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအင် ဆန္ဒများကိုဖြည့်စည်းပေးလို့ မိမိ လိုအင် ဆန္ဒများလဲ ဖြည့် မည်ပင် အရှင်ဝိစာရိန္ဒမထေရ်သည် လူအများစု တိုင်းသူပြည်သားတို့ အပေါ် သနားဂရုဏာ မေတ္တာထားရွေ့
ဆောင်ယူတတ်သော ရဟန်းဖြစ်သည့်အတွက် လူအများစု တိုင်းသူပြည်သားအများစုအပေါ်၌ သာ ယခုဖုန်း အလှူငွေ ဝတ္ထုတော်အား အားကိုးရွေ့မျှော်ကိုပါတယ်တစ်ကယ်သံ ဃာတော်တစ်ချို့သည် အာဏာရှိမှ ဥစ္စာများမှ ရွှေလက်တွဲလိုချင်ကြလို့ အပြောအဆို မကင်းဖြစ်ရသည့်
အဖြစ်ဆိုးများရှိ၏ ဘုန်းဘုန်းအတွက်ကတော့ အာဏာရှိမှ ဥစ္စာများမှ ရွှေလက်တွဲစရာမလိုပဲ အများပြည်သူပြည်သား တိုင်းရင်းသားများ ဒို့အတွက်ရှိနေသေးပင် သာသနာပြုနိုင်သည်ဆိုတာကို ယုံကြည်သည်ပင်။ မိမိ လောဘစိတ်ကိုအလိုမလိုက်သည်မို့ ဖုန်းအလှူခံခြင်းကိစ္စကိုလဲ
အဓိဌာန်ပြုကာ ၂ ပတ်ပဲ အလှူခံပါ့မယ်တစ်ကယ်။ ဘုန်းဘုန်း ယခုအခါ Iphone 13 Pro White (1TB) အတွက် စုပေါင်းဝတ္ထုအလှူငွေ ၈ သိန်းရရှိနေပြီဖြစ်လို့ ကျန်အလှူငွေများကို Kpay 09-45-5022691 Account Name: Nay Myo Kyaw သို့ စွန့်လှူနိုင်ပါသည်။ အမေရိကား
မှ ဘုန်းဘုန်း ရဟန်းဒါယကာ၊ ဒါယကာမများ ကြိုတင် Order မှာယူရွေ့ ဝယ်ယူထားပြီးပင်ဖြစ်သည် 🦠🙏🏻🧘🏻‍♂️🧘‍♀️🤍🇲🇲🦠 (ဘုန်းဘုန်း ဘယ်တော့မှ အကြောင်းမဲ့ အလှူမခံပါ အလှူခံသည့်ရက် ကို အမြဲအချိန် အတိုင်းအတာထားရွေ့သာ အလှူခံထားသည်ဆိုတာကလဲ အဓိဌာန်
အလှူဖြစ်သည်။ နင်တို့ ရှေ့ဆက် ဆက်သွယ်ရေးက အရေးကြီးကြတာမို့ တတ်နိုင်သလောက် နည်းများမဆို ပါဝင်လှူဒါန်းကြပါ တကယ်) ခရက်ဒစ်.
နိုငျငံသားအဖွဈ ခံယူ သူ တိုငျးကို နထေိုငျဖို့အိမျတှေ အလကားပေးတဲ့ နိုငျငံ ( ၅ ) နိုငျငံ